Warqad Furan oo ku socota Bulshada Anime (Talo ku socota Taageerayaasha Anime) - Kale
Warqad Furan oo ku socota Bulshada Anime (Talo ku socota Taageerayaasha Anime)
Gacaliye taageerayaasha anime , (iyo bulshada anime).
Haddii ay jirto hal shay oo aan hore u soo arkay yar sano, waa sida ay u dhaqmaan qaar ka mid ah taageerayaasha anime.
Khasaarayaal waqti aad u badan gacmahooda ku jira.
Kuwani waa qaar ka mid ah ereyada aan u isticmaali lahaa inaan ku sharaxo taageerayaashan anime ime nooca yaa halaagso qof walba. Waxaan ka hadlayaa abuuraya anime, sidoo kale (bloggers iyo wixii la mid ah).
Iyada oo madadaalo ah sida ay tahay in lagu sugnaado 'helitaanka' dhaleeceyntaas, waxaan doorbidi lahaa halkii aan talo wadaag ka siin lahaa.
Iyo dhaliilaha ka imanaya banaanka bulshada anime (dibedda), waa sababta oo ah dad cayiman oo halaagso dadka kale oo dhan, taas fikradaha qaarkood waa run.
Hadda taasi waa jidka, waxaan la wadaagi doonaa xoogaa talo ah taageerayaasha anime ee guddiga oo dhan.
Sababtoo ah marar badan, waxaan arkaa dad ka tirsan bulshada anime oo jebinaya xeerarkan. Taas oo nolosha bulshada anime ka dhigaysa mid aad u adag, iyo ka yar madadaalo natiijo ahaan.
Talo ku socota taageerayaasha anime:
1. Jooji inaad f *** ka bixiso waxa dadku aaminsan yihiin
Eeg - Waan fahmay. Adiga ha sameyn rabto in lagu xukumo, adiguna kuma raaxaysatid dareenka la socda.
Ka dib oo dhan - yaa sameeya? Waa waayo-aragnimo sh ***, laakiin taasi waa nolosha.
Waad ogtahay sababta? Si kastaba ha noqotee waa lagu xukumi doonaa, haddii aad jeceshahay iyo haddii kaleba.
Dadku waxay xukumi doonaan faraska sh ** haddii ay qasab tahay. Ama dhagax rogrogmada oo dhulka yaal.
Taasi waa noocyada dadka aan ku leenahay meerahan.
Laakiin… markii aad barato inaad joojiso ka taxadarka waxa dadku u malaynayaan (oo ay ku jiraan waxa dadku ka fikiraan anime aad jeceshahay), waxaad noqon doontaa qof faraxsan.
Waa sababta aan ugu qoslo KALIYA troll-comment aan ka helo internetka, ku dhowaad maalin kasta. Ama wixii faallooyin nacasnimo ah guud ahaan.
Waa sababta aan u abuuri karo qoraal cinwaan looga dhigay : 17-ka Anime Ee Ugu Niyad-jabsan Anime Taageerayaasha BADAN Waxay U Muuqdaan Inay Jecelyihiin
Oo samee la'aan siinta F ku saabsan waxa dadku ka fikiri doonaan.
Waxaan ku idhaahdaa waxa aan ku dareemo daacadnimo run ah, la'aan noqoshada cu ** ama elitist leh maskax kacsan. Sababtoo ah qofna ra’yigiisa xun xitaa wuu khuseeyaa.
Uma baahni ogolaansho koox doqonno ah oo raba inay nabadgelyo darrada ku riixaan kuwa kale.
Taasina waxay igu hogaamineysaa taladayda xigta…
2. Jooji raadinta ogolaanshaha
Waan qoslaa markaan arko dad badan oo internetka ka xanaaqsan, kaliya aniga si cad u qira Ma ahi taageere taxane caan ah sida Steins Gate ama Beentaada Abriil.
Ama sida aan ugu raaxeysto daawashada bandhigyo loogu magac daray , ama sida aanan u ahayn taageere nooca subbed ee Konosuba.
Maxaad - waxaad u malaynaysaa inaan u dhaqmo sida badankood dadka oo kaliya kuu sheeg waxyaabaha aad raba inaad maqasho, markaa waad 'ansixin doontaa' ra'yigayga?
Waa noocee noloshu?
Nolol baan ku noolahay oo waxaan idhaahdaa wax kasta oo aan doonayo inaan dhaho, iyadoo aan loo eegin haddii qofna ku raacsan yahay.
Uma baahni dharbaaxo dhabarka ah in la ii sheego inaan 'saxanahay'. Aniguna uma baahni ogolaansho si aan 'wanaag' nafteyda uga dareemo.
Mar hore ayaan sameeyaa. Maxaa yeelay waxaan ku kalsoonahay naftayda IYO isku kalsooni.
Adigana waa isku mid
Iyadoo aan loo eegin danahaaga anime.
Jooji raadinta ogolaanshaha. Uma baahnid. Oggolow naftaada halkii.
Markaad noloshaada sidan ugu noolaan karto, waxba kaa hor istaagi maayaan. Mana jiraan wax jabinaya farxaddaada.
Taasina waa iyada oo aan loo eegin haddii aan ka hadlayno bulshada anime, ama nolosha guud ahaan.
La xiriira: 7 Dhaliilo Xad dhaaf Ah Oo Ku Saabsan Anime
3. Maskaxdaada fur
Way fududahay in la xidho. Taasi waa sababta aan nacayb badan ugu qabo hadalka badankood ka baqayaan (fiiri barta # 1).
'Xirnaansho-maskaxeed' waa habka asalka u ah daawashada adduunka. Taasi waa sidoo kale sababta ay dadku u cunaan wararka xun ee caadiga ah ee quraacda, iyo sababta inbadan oo naga mid ah loogu xukumo si naxariis darro ah, la'aan wax dareen ah haba yaraatee.
Iyo sida sasabashada ay u noqon karto in lagu dhaleeceeyo 'taageerayaasha anime' oo u maleynaya in adduunku ka ifayo A-godkooda…
Waxaan jeclaan lahaa isla dadkaas inay maskaxdooda furaan oo waxyaabo ka eegaan aragti ka duwan
Xitaa haddii ay yihiin waxa loogu yeero 'cadow' kuwaas oo dhibaato igu qaba (taas oo runti loo jiheysto naftooda).
Hadday fureen maskaxdooda, adiguna waad samaysay:
Bulshada anime waxay ahaan laheyd dheeraad ah taageersan.
Waxaa jiri lahaa ka yar dhaleeceynta ku saabsan taageerayaasha anime guud ahaan (Ma jecli inaan qirto laakiin haa, qaar iyaga ka mid ah waa xaq).
Bulshada anime (iyo warshadaha) ayaa dhaqso u kori lahaa. Waxay u egtahay in taageerayaasha qaar ay aad u daneynayaan inay 'kugu soo kacaan' adiga marka loo eego sida ay u taageerayaan waxa ay aadka u jecel yihiin: anime.
Tanina waxay ku socotaa dadka maamula boggaga anime ee u gaarka ah (ama u dhigma). Maskaxday garaacaysaa.
Iyo tan ugu muhiimsan: furitaanka maskaxdaada waxay noloshu ka dhigaysaa mid aan dhibaato badan lahayn guud ahaan. Iyadoo aan loo eegin anime.
Sababtoo ah markaa waxaad ka arki kartaa waxyaabo aragti sare, waxaadna noqon doontaa mid xukun yar (iyo kalsooni la'aan) naftaada.
Qof walba wuu guuleystaa.
Ma lihi wax kale oo aan iraahdo.
Qaado ama ka tag!
7 Sababaha Tooska Ah Ee Ay Taageerayaashu U Neceb Yihiin Ingiriis Dubbed Animes
waa inuu arko anime waqtiga oo dhan